Zenzekelayo ice ibhokisi cookies eyenzelwe cookies ekwenzeni kumatshini - China Shanghai Hanjue Machinery
Zenzekelayo ice ibhokisi cookies eyenzelwe umatshini wokwenza cookies
Inkcazo: I-cookie eyenzelwe ungenziwa ngemfuneko kunye kuyilo iindidi. Kubonakala iindlela ezininzi ukwenza cookie, ezinye iivenkile ezincinane namakhosikazi nenze ukutya ngesandla, ukuba unalo ngexabiso emangalisayo kunye nabantu yobudala eyahlukeneyo like this ukutya. Iindaba ezimnandi kukuba HJ-860 umatshini wethu encrusting ungenza ukutya kunye namandla eliphezulu. injineli wethu izakudibanisa ucingo cut kumatshini ukwenza cookies, ngale ndlela unako ukulondoloza imali nokwenza cookies ezimbonakalo intle. Unga nqakraza ividiyo ukubona umatshini isebenza njani i ...
Iindaba ezimnandi kukuba HJ-860 umatshini wethu encrusting ungenza ukutya kunye namandla eliphezulu. injineli wethu izakudibanisa ucingo cut kumatshini ukwenza cookies, ngale ndlela unako ukulondoloza imali nokwenza cookies ezimbonakalo intle. Unga nqakraza ividiyo babone indlela esebenza ngayo umatshini kunye naziphi na iingxaki nceda qhagamshelana ukuthengisa zethu.
1) iintlobo ezininzi cookies ngumngundo singayilwa.
2) wena Umatshini, siya ungadibanisa ezinye iinkqubo umatshini kumatshini.
3) IsiNgesi, IsiTshayina ulwimi, Arabic zizodwa ..
4) Uqeqesho ezamahala ziya kufundiswa xa umatshini uvavanyo umthengi.
Previous: Zenzekelayo ice cream umatshini wokwenza mochi
Next: Zenzekelayo ball intlanzi inyama ibhola ukwenza machine
HJ-860 Panda cookies Umatshini uyila / eyenzelwe ...